अब गाईको पनि जन्म, बसाँइसराइ र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने !::Hamrodamak.com
अब गाईको पनि जन्म, बसाँइसराइ र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने !
रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गाईको पनि जन्म, बसाइ सराइ र मृत्यु दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । गाईको जन्म, बसाइ सराइ र मृत्यु दर्ता गराएबाफत किसानहरुले भत्तासमेत पाउँछन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले छाडा गाई बढ्दै जाँदा सडक दुर्घटना रोक्न र किसानको बालीनालीमा नोक्सानको समस्या रोक्ने उद्देश्यले यस्तो उपाय निकालेको हो ।
गाईको जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता र बसाइ सराइ गराउने किसानलाई नगरपालिकाले यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । गाईको विवरण दर्ता गराउन वडा कार्यालय आउने किसानलाई प्रतिगाईको तीनसय देखि ५ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने सोच नगरपालिकाले बनाएको उनले बताए ।
नगरपालिकाले नेपाल सरकारको पशु बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा गर्ने किसानलाई बीमाको ५० प्रतिशत रकम अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
झापा , २६ माघ । झापामा यसवर्ष एक हजार छ सय हेक्टरमा चैते धानखेती विस्तार गरिने भएको छ ।‘चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत झापाका आठ स्थानीय तहको एक हजार ६०० हेक्टरमा चैते धानखेती...
इलाम, २१ माघ । चिया विषयमा पढाइ हुने भएपछि इलामवासी उत्साहित भएका छन् । इलाम सूर्योदय नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा चिया विषयलाई पाठ्यक्रमको रूपमा लागू गर्ने योजना अघि बढाएसँगै यस विषयमा पढाइ हुनेभएपछि किसानहरु उत्साहित...